चीनमा अस्ट्रेलियाली मिडियामाथि प्रतिबन्ध  Sourya Online
चीनमा अस्ट्रेलियाली मिडियामाथि प्रतिबन्ध
एजेन्सी २०७५ भदौ २० गते ८:४० मा प्रकाशित
वेइजिङ । चीनले अस्ट्रेलियाको राष्ट्रिय प्रसारणकर्ताको वेबसाइटमाथि पहिलोपटक प्रतिबन्ध लगाएको छ । अस्ट्रेलियन ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसन, एबिसीका अनुसार चीनले अचानक दुई हप्ता अगाडिदेखि आफ्ना सबै वेबसाइट र एपहरू बन्द गराएको हो ।
यस विषयमा चीनले भने सो वेबसाइटले देशको कानुन उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको छ तर स्पष्ट रूपमा कुन कुराको विरुद्धमा रहेको भन्ने चाहिँ उल्लेखित नगरेको बताइएको छ ।
चीनले लामो समयदेखि नै इन्टरनेट सेन्सरसिपसम्बन्धि कडा कानुन अपनाउँदै आएको छ र अहिलेसम्म थुप्रै विदेशी समाचार साइटहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । विवादित सामग्रीहरू देशका जनतासम्म नपु¥याउन चीनले यस्तो नीति लागू गर्दै आएको हो । यसअन्तर्गत बिबिसी र न्युयोर्क टाइम्स पनि चीनमा अहिले उपलब्ध छैनन् ।
चीनस्थित एबिसीका सञ्चारकर्मीले यस खबरलाई पुष्टि गरेका हुन् । तर, पनि यसअघि चीनले एबिसीका वेबसाइट र एपहरूलाई जनतासमक्ष धेरै ठूलो पहुँच र स्वतन्त्रता दिइएको थियो । यस्तोमा चिनियाँ सेन्सरसीपले समेत सबै सामग्री चिनियाँ जनतासम्म पु¥याउन स्वीकृति दिँदै आएकाले एबिसीले गतवर्ष मात्र चिनियाँ भाषामै नयाँ भर्जनको समाचार साइट लन्च गरेको थियो ।
चीनको केन्द्रीय साइबरस्पेस अफेयर्स कमिसनका अधिकारीले बताएअनुसार चिनियाँ कानुनमा गलत हल्ला फैलाउने किसिमका खबर, यौनजन्य सामग्री, जुवाको प्रचार गर्ने, आतंकवादको सन्देश दिने र हिंसा भड्काउने खालका जानकारीहरूलाई अवैध मानिन्छ ।
त्यसैकारण यस्ता हानिकारक खबरले चीनको सुरक्षा र राष्ट्रिय गौरवमा चोट प¥ुयाउने खतरा भएकाले नै चिनियाँ सरकारले यसप्रति विशेष ध्यान दिँदै आएको उनको भनाइ छ । तर, एबिसीले चाहिँ यस्ता कुनै कार्यमा संलग्न नभएको दाबी गरिरहेको छ । त्यसैले पनि दुई देशबीच गम्भीर बन्दै गएको राजनीतिक समस्याका कारण चीनले यस्तो कदम उठाएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
यसअघि अस्ट्रेलियाको आन्तरिक राजनीतिमा चीनले अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने गरेको खबर बाहिर आएपछि अस्ट्रेलियाको सरकारले देशमा चिनियाँ लगानीलाई सीमित गराउने निर्णय लिएको थियो ।
यसप्रति चीनले गम्भीर आपत्ति जनाए पनि एबिसीले गतवर्ष अस्ट्रेलियामा बेइजिङको प्रभावबारे अनुसन्धान गरेको हो । त्यसपछि क्यानबेरा स्थित चिनियाँ दूतावासले शीतयुद्धको मनस्थितिले बिना कुनै प्रमाण बनाइएको गलत समाचार भन्दै एबिसीको कडा आलोचना गरेको थियो ।
त्यतिवेला अस्ट्रेलियाले चीन विरुद्धको नीति अपनाइरहेको प्रस्ट भइसकेको भन्दै चिनियाँ राजनीतिज्ञहरूले आक्रामक प्रतिक्रियासमेत दिएका थिए । यति मात्र नभएर अस्ट्रेलियाले गतवर्ष पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरा अघि ल्याउँदै चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई फाइभजी नेटवर्कका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नबाट वञ्चित गराएको थियो ।
यसप्रति पनि चीनले धेरै ठूलो असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । यस विषयमा अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कटिस मोरिसनले भनेका छन्, ‘प्रतिबन्ध लगाउनु चीनको समस्या हो । चीन एक सार्वभौमिक सत्ता हो त्यसैले, त्यहाँ के हुन्छ भन्ने निर्णय उनीहरू गर्छन् र यहाँको सबै निर्णय हामीले लिन्छौँ ।’
चीनको अर्थतन्त्र सुस्त
ट्रम्पको नयाँ प्रस्ताव अस्वीकार्यः डेमोक्र्याट्स
सोमालियाका विद्रोहीमाथि अमेरिकी हमला
इस्लामलाई चिनियाँकरण गर्न पञ्चवर्षीय योजना
चीनको ऋण कूटनीतिः अमेरिकाको टाउको दुखाइ
प्रधानमन्त्री मेको ठूलो पराजय ! अब के गर्लिन् ?
कांग्रेसले संसद् बैठक अवरुद्ध गरेपछि स्थगित
यसरी हटाइए टुँडिखेल वरिपरिका ‘ट्रि गार्ड’
बाजुरामा पनि हिमपात सुरु
अनुसन्धान गम्भिरताका साथ भइरहेको छ: प्रवक्ता सुवेदी
सरकार सच्चिएर अघि बढ्नु पर्छ: तरुण दल